Muuri News Network » Meydka Marxuum Jen, Dhega-badan oo aan lagu aasi doonin Magaalada Muqdisho.
Meydka Marxuum Jen, Dhega-badan oo aan lagu aasi doonin Magaalada Muqdisho.
Warar Cusub ayaa ka soo baxaya halka lagu aasi doono Abaanduulihii hore ee Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed Marxuum Dhega badan.
Meydka Abaanduulihii hore ee ciidamada Xooga dalka Somaliya Jeneraal C/kariin Yuusuf Aadan Dhega-badan, ayaa lagu wadaa in goor dhaw loo duuliyo Degmada Xeraale oo ka tirsan Gobolka Galgaduud Bartamaha dalka Somaliya.
Marxuumka ayaa goor dhaw lagu wadaa in Salaada Janaasada lagula tukado Madaxtooyada Somaliya, halkaasi oo ay kula dukan doonaan Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya iyo ehelada Marxuumka.
Intaasi kadib waxaa loo qaadi doonaa Meydka Marxuumka Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi xaadir ku ah Saraakiisha ciidamada Milletariga ee Dhega-badan ay isla soo shaqeeyeen, iyadoo kadibna loo duulin doono Degmada Xeraale.
Qorshaha ayaa ah in Degmada Xeraale oo Marxuumka uu ka soo jeedo lagu aaso, waxaana horay u sii raaci doono Saraakiisha ciidamada ay isla soo shaqeeyeen si ay qayb uga noqdaan aaska loo sameynaayo Marxuum Jeneraal Dhega-badan.
Allaha u naxariistee Marxuum Jeneraal Dhega-badan ayaa shalay wuxuu ku geeriyooday weerarkii Ururka Al Shabaab ay ku soo qaadeen Hoteelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho, xilli uu si adag u dagaalamaayay Marxuumka.